Hlanza futhi unakekele ukuhlobisa kwe-WPC
I-WPC decking inezinzuzo eziningi ngaphezu kokufakwa phansi kwendabuko kokhuni oluqinile futhi manje iya ngokuya ithandwa kakhulu.Kodwa akukho ukuhlobisa kwe-WPC okuyinhlanganisela okungama-100% okunakekelwa kwamahhala.Uma kusetshenziswa, kusadinga ukulungiswa okuningi okujwayelekile ukunweba impilo yensizakalo, kepha ukugcinwa kulula futhi Futhi amabala ...
Umhlahlandlela Wokufaka we-WPC Wall Cladding
I-WPC ishoda ngepulasitiki yokhuni futhi iyinhlanganisela, ukumelana nesimo sezulu, ukungangeni manzi, ukuvimbela izinambuzane nokugcinwa okuphansi.Ngenxa yamakhono amaningi kangaka amahle, abantu abaningi bayokhetha iphaneli yodonga lwe-WPC ekuhlobiseni udonga lwabo. Ngakho-ke mhlawumbe elinye ikhasimende lizodida ngokufakwa, nge-inst ...
Ungayifaka Kanjani i-WPC Decking?
I-WPC Decking ithokozela izinzuzo zombili zokhuni nezinto ze-polymer, kodwa ikhululekile emaphutheni abo. kulula ukufaka ...
I-Co-extrusion, ubuchwepheshe bamuva ebangeni elihlanganisiwe lokhuni, lobu buchwepheshe obuphambili be-cap budluliselwe kumgogodla, izinto zayo zobuso ezivalekile yilokho okunikeza ibhodi ngalinye ukusebenza okuhlukile nokuphakeme.Izakhiwo zokuvikela ikepisi zenza ibhodi yoku-extrusion izinze ngokwedlulele, ubuso ngeke bunwebeke futhi ...
Luyini uchungechunge lwe-3D embossed?
I-Lihua WPC 3D Embossed Composite Decking ingumkhiqizo omusha wokuhlobisa ubuchwepheshe, noma ungawubiza ngokuthi i-embossed ejulile noma i-super embossed. Ubuchwepheshe obuphambili inqubo ejulile embossed ngesikhathi sokukhiqiza.Uma i-extrusion isiqedile, iphethini ingenye ebusweni bamabhodi. Ubuchwepheshe obusha be-embossing ye-3D ...
Luyini uchungechunge lwe-WPC?
I-WPC iswele izinhlanganisela zepulasitiki zokhuni, into esemqoka yi-PE kanye nemicu yezinkuni.I-WPC ijabulela izinzuzo zombili zokhuni nezinto ze-polymer.Kodwa ikhululekile emaphutheni abo. ubuhle bayo obuhle, obungokoqobo ...
WPC decking esiyinhlanganisela, Ukuhlobisa i-WPC yangaphandle, WPC phansi, WPC decking ongaphandle, ngokhuni plastic decking esiyinhlanganisela, WPC decking phansi,